MX Snapshot: Ahoana ny fomba hamoronana MX Linux Respin manokana? | Avy amin'ny Linux
Ho an'ny maro amintsika izay maniry fatratra Tontolo Linux, tsy hoe ilaina fotsiny ny mampiasa azy, fa imbetsaka isika no mitady a Fitsinjarana GNU / Linux mety na mitady fomba hamoronana azy, na avy amin'ny rangotra amin'ny fomba karazany LFS (Linux avy amin'ny Scratch) na miorina amin'ny fizarana lehibe sy mafy hafa, toy ny, Debian, Ubuntu, Fedora ary Arch.
Mazava ho azy fa mitaky izany matetika fahalalana lalina ary ny fampiasana fitaovana rindrambaiko manokana, izay tsy isaky ny mpampiasa solosaina mahazatra (birao / fitantanan-draharaha) matetika no manana. Na izany aza, ny Fitsinjarana MX Linux, izay resahintsika matetika, dia manana fampiharana mahasoa sy tsotra ary mahomby antsoina MX Snapshot, izay mamela ny mpampiasa Linux saika hamorona ny MX Linux Respin azy manokana.
Azon'ny Mamerina, iray bootable (mivantana) ary sary ISO azo apetraka izay azo ampiasaina ho toy ny teboka famerenana, medium fitehirizana ary / na Fitsinjarana azo zaraina indray ny GNU / Linux ankoatry ny hafa. Noho izany, ity fitaovana ity dia solon'ny maoderina sy mahomby ho an'ny taloha, toy ny «Remastersys y Systemback», fa ny anao ihany no miasa Distro teratany, izany hoe, MX Linux.
Ankoatra izany, MX Linux ankehitriny koa dia misy fitaovana rindrambaiko hafa antsoina hoe «MX Live USB Maker (Creador de USB Vivo MX)» izay tanjon'izy ireo dia ny firaketana ny «Imagen ISO» namboarina avy amin'ny Rafitra miasa ankehitriny, namboarina sy namboarina Usuario Linux mihoatra ny iray «Unidad USB».
Hanitarana ireo vaovao rehetra ireo amin'ny MX Linux sy ireo fitaovana ao aminy, manasa anao izahay hanao tsindrio ity manaraka ity rohy ary / na vakio ny bokinay manaraka mifandraika amin'izany:
1 MX Snapshot: Fitaovana snapshot
1.1 Dingana sy torolàlana teo aloha alohan'ny hampiasana MX Snapshot
1.1.1 Dingana teo aloha
1.2 Ahoana ny fampiasana MX Snapshot?
MX Snapshot: Fitaovana snapshot
Dingana sy torolàlana teo aloha alohan'ny hampiasana MX Snapshot
Ireo dingana voalaza sy atolotra etsy ambany dia ho an'ny a Mpampiasa MX Linux rehefa mametraka, manamboatra, manatsara ary manamboatra su Distro MX Linux araka ny itiavanao azy dia afaka mamorona a ianao Mamerina mamela izany, ankoatry ny zavatra hafa, avereno haingana mitovy amin'ny toe-javatra rehetra manome antoka azy io, fadio ny fampiasana ny Distro tany am-boalohany avy hatrany am-boalohany ary tsy maintsy manomboka indray. Na raha sanatria, tianao zarao amin'ny hafa ny Respin anao, na inona na inona antony, toy ny famoronana Vondron'olona manodidina azy.
Sasao amin'ny tanana ny zava-drehetra tsy ilaina: Tao anaty lahatahiry «/ home /…» ihany no navelako tao, ireo rakitra manokana na anao manokana izay tiako hotehirizina sy / na zaraiko amin'ny hafa. Aza adino fa vitsy ny rakitra tafiditra ao, dia ho kely kokoa ny ISO namboarina. Toy izany koa no mihatra amin'ny rindranasa, izany hoe, arakaraky ny vitsy ny rindranasa tafiditra ao na ny kely kokoa dia tsara kokoa ny mitahiry habe ISO mety ho an'ny fisintomana sy fampiasana amin'ny USB Memory Memory kely.
Fafao hoazy daholo izay mihoatra izay: Ho an'ity tanjona ity dia mety ny fampiasana ireto fisoratana anarana MX Linux manaraka ireto sy fampiharana ivelany hafa: MX Cleanup (MX Clean) sy BleachBit. Ampiasao ny roa kokoa amin'ny fahaiza-manadio farany ambony, ary ity farany amin'ny maody mpampiasa mahazatra anao ho "faka".
Vonoina / esory ireo serivisy tsy ilaina rehetra ireo: Ho an'ity tanjona ity, ny fampiasana ny fisoratana anarana MX Linux manaraka sy ny fampiharana ivelany hafa dia mety: Ny fampiharana teratany "Session and Start" an'ny "Configuration Menu" ho an'ny XFCE sy ilay application ivelany Stacer amin'ny safidiny "Serivisy" . Ho fanampin'izay, ny Stacer dia mamela antsika hanao debugging tsara amin'ny fisie log (* .log) ao amin'ny safidiny "System Cleanup".
Tehirizo ny toe-javatra sy ny fanaingoana an'ny mpampiasa: Raha te hitahiry sy handova ampahany na izay efa natao tao amin'ny mpampiasa MX Linux noforonina tamin'ny mpampiasa vaovao noforonina tao amin'ny Respin ianao dia tsy maintsy apetrakao ireo lahatahiry sy rakitra ilaina ao amin'ny lalana «/ home / myuser / »ao anatin'ny làlana« / etc / skel ». Ohatra:
Izay hafa heverinao fa ilaina, ohatra: .conky, .fluxbox, .kde, ankoatry ny hafa.
Ny hafa izay heverinao fa ilaina, ohatra: .wbar, .xinitrc, .xscreensaver, sns.
Ahoana ny fampiasana MX Snapshot?
Usar MX Snapshot tena mora be izany. Vantany vao nosokafana (novonoina), dia asehony amin'ny efijery voalohany ity, izay azo jerena amin'ny sary eo ambony eo akaiky eo:
Toerana ao / (faka): Mba hampisehoana hoe hatraiza ny habaka nozahana ao amin'ny OS iray manontolo hangeja.
Toerana malalaka ao an-trano: Mba hampisehoana raha misy toerana malalaka ao amin'ny OS Home
Toerana misy ny sary: Mba hampisehoana ny làlana misy anao sy / na hanondroanao ny anao, izay hamoronana ny ISO.
Anaran'ny sary: Mba hampisehoana ny anarana misy anao sy / na hanondroanao ny tenanao, mba hamboarina ny ISO.
Amin'ny efijery manaraka, araka ny hita eo amin'ny sary eo ambony, dia avela hanondro izay lahatahiry mpampiasa noforonina tsy maniry tohana, raha toa ka voafidy ny safidy Kaonty voatahiry (ho an'ny backup manokana). Ity safidy ity dia ahafahan'ny mpampiasa noforonina hitazona an-tsoratra sy misy ao amin'ny Mamerina samy amin'ny maody «En vivo» (velona) toy ny rehefa mametraka mitovy.
Raha sanatria, voafantina ny safidy "Kaonty voafafa naverina amin'ny laoniny (hizara amin'ny hafa)", tsy misy kaonty mpampiasa ho voatahiry (kopia) ary amin'ny alàlan'ny default, io safidy io dia hamerina ny tenimiafin'ny "Demo" y "Root" ho an'ireo izay tafiditra ao anaty default MX Linux.
Ankoatra izany, MX Snapshot manolotra ireto paikady famatrarana manaraka ireto: lz4, lzo, gzip ary xz, ity farany no mahomby indrindra rehefa manery ny rakitra hapetraka ao amin'ny ISO.
Ho an'ny ambiny, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra «manaraka» hoforonina ny ISO ary azontsika atao ny mandoro izany amin'ny DVD na USB amin'ny alàlan'ny fampiasana azy MX Live USB Maker avy amin'ny MX Linuxna Balena Etcher, mpanoratra sary an'i Rosa, Ventoy na ny baiko "dd" avy amin'ny hafa Fitsinjarana GNU / Linux, na mampiasa Rofosy avy amin'ny Windows.
naoty: Raha tianao izany (ovay) ny safidin'ny fanombohana menio (boot) ny Respin vaovao dia tokony amboarina ny rakitra amboary ny rakitra mx-snapshot.conf inona no eo amin'ny làlana "/ sns" ary apetraho ny safidy "edit_boot_menu" en "Ary izao dia". Midika izany fa hisy varavarankely fanovana ho an'ny rakitra «isolinux.cfg» izay ahafahantsika manitsy azy ireo, ka rehefa manomboka ny Respin, ohatra, dia mivoaka ny anarana vaovao an'ny Respin mahazatra, fa tsy, "MX Linux" izay tonga amin'ny toerana misy anao.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba MX Linux respin tsindrio ireto rohy manaraka ireto:
Forum MX Linux - Valiny Desktop MX (Lisitra)
MX 19.2 Fanontana manokana momba ny base Edition
Sourceforge - valin'ny fiarahamonina
Ary eto, raha te hahalala bebe kokoa momba ny a Fametahana MX Linux tsy ofisialy antsoina hoe FAHAGAGANA, tetikasa iray izay nisolo ny iray teo aloha nantsoina mpitrandraka miorina amin'ny Ubuntu 18.04 mampiasa Systemback.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny fitaovana vazimba MX Linux antso «MX Snapshot», izay fampiasana rindrambaiko tena tsara izay mamela ny famoronana MX Linux Respin manokana sy azo ampidinina, izany hoe sary ISO azo alefa (mivantana) izay azo ampiasaina ho toy ny teboka famerenana, fampitaovana fitahirizana ary / na fizarana; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » MX Snapshot: Ahoana ny fomba hamoronana MX Linux Respin manokana?
RocoElWuero dia hoy izy:
Midika izany fa tsy afaka mamorona sarin'ny distro linux napetraka ao amin'ny solosaiko aho?
Mamaly an'i RocoElWuero
Miarahaba anao, RocoElWuero. Tsia, ity fitaovana ity dia zanaky ny MX Linux, ary tsy namboarina hiasa amin'ny Distros hafa. Izay, raha vita, dia ho mahatalanjona, noho ny fahombiazany sy ny fahaizany miasa tsara.
Ronald K. dia hoy izy:
habe das mit dem Schnappschuß schon begriffen und schon einige erstellt, was auch wunderbar funktioniert hat unter mx18.3 konnte ich die ISO Datei auch prima auf eine andere Festplatte installieren ohne das es Probleme gab, —- Aber unter MX 19.3 a Schnappschuß erstellen und erhallte dann auch eine funtionierende ISO Datei die auch startet und bis zu einem Punkt abläuft, wo mich das Installprogramm nach Loginname und Passwort fragt, was itch auch eingebe und dann erscheint ein Dollerzeneht diet raha tsy izany…… raha tsy izany dia mila mx19.3 bei
mx 18.3 ny zava-drehetra ao amin'ny Destoppbildschirm weiter syn erscheint das Install brogramm und ich kann es auf Festplatte installieren - be mx 19.3 geht das nicht hat nicht einmal geklappt was soll ich da beim Dollerzeichen eingeben ??? Bitte helft dia hitako ny tolotra einfach MX Linux. Danke
Valiny tamin'i Ronald K.
Grüße, Ronald. Ich habe dia nicht ganz verstanden. Ich habe jedoch mein eigenes Respin (live und installierbarer Snapshot) von MX Linux 19.3, genannt MilagrOS, und es funktioniert ohne Probleme. Ich weiß nicht genau, was Ihr Problem ist, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn Ihr Respin Sie irgendwann nach einem Kennwort fragt, es das Standardkennwort sein sollte, in MX Linux, das, glaube ich, «demo» oder «root» ist, andernfalls sollte es das sein, das Sie dem Benutzer zugewiesen haben, der vor dem Respin angelegt wurde. Ich weiß nicht, ob is nützlich sein wird, aber dies ist die URL meines Respins, fall Sie is erforschen und sehen möchten, wie is nützlich sein kann: https://proyectotictac.com/distros/
Miarahaba, Ronald. Tsy dia azoko tsara. Na izany aza, manana ny respin (sary mivantana sy azo ampidirina) an'ny MX Linux 19.3, antsoina hoe MilagrOS aho ary miasa ho ahy tsy misy olana izany. Tsy ho fantatro tsara hoe inona ny olana, saingy azoko an-tsaina fa raha misy fotoana angatahin'ny respin anao tenimiafina dia tokony io no tonga tampoka, ao amin'ny MX Linux, izay heveriko fa "demo" na " faka ", raha tsy izany dia tokony ho ilay notendrenao ho an'ny mpampiasa noforonina alohan'ny respin. Tsy fantatro raha hahasoa anao izany, fa ity no url an'ny respin ahy raha toa ianao te-hijery azy io ary hahita ny fomba mahasoa azy: https://proyectotictac.com/distros/